Tacsi: Inaa lillaahi wa inaa ileyhi raajicuun | KEYDMEDIA ONLINE
16 January 2022 Yaasiin Farey oo laga hor istaagay booqashada Mucalimuu
Tacsi: Inaa lillaahi wa inaa ileyhi raajicuun
Innaalillaahi wa innaa Ilaahi Raajicuun, waxaa magaaladda Ankara ee dalka Turkiga ku geeriyooday Marxuum Prof. Jabriil Afrax Ayaanle.
ANKARA - Prof. Jabriil Afrax Ayaanle allaha u naxariiste, wuxuu ahaa shaqsi waqti badan galiyay barbaarinta iyo waxbarashada agoonta Soomaaliyeed xili dalku uu ku jiray marxalad adag.
Allaha u naxariiste, marxuumka wuxuu ahaa shaqsi aad u wanaagsan oo u soo halgamay Afartankii sano ee lasoo dhaafay dalka iyo danyarta Nugul, wuxuuna wax badan kasoo qabtay hormarinta waxbarashada iyo caawinta arday gaareysa 30.000 Qaarkoodna ay maantay hayaan xilal Wasiirnimo.
Agaasimaha Keydmedia Online Cali Saciid Xasan oo ay saaxiibo ahaayeen marxuumka, wuxuu tacsi tiiraanya leh la wadaagayaa guud ahaan reer Afrax Ayaanle, gaar ahaan qoyska reer Jabriil oo ay u horeyso Hooyo Shugri.
Sidoo kale waxaan illahey Subxaanulwatacaala ah ka baryeenaa in Eheladii iyo Qaraabadii uu ka tagay marxuum Prof. Jabriil uu Samar iyo Imaan ka siiyo, murugtaasnah Illahey ugu badalo Ajar iyo Xasanaad.
KEYDMEDIA ONLINE ayaa booqatay Prof. Jabriil toban sanno kahor:
Cududaar: Waxaa suurta gal noo noqon weysay in dhamaan shaqsiyaadka tacsida loo dirayo iyo kuwa diraya magacyadooda la wada daabaco.
Innaalillaahi wa innaa Ilaahi Raajicuun
Yaasiin Farey oo laga hor istaagay booqashada Mucalimuu
Warar 16 January 2022 22:03
Farey, wuxuu ka mid yahay shaqsiyaadka ku eedeysan kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo ah gabar ka tirsaneyd NISA, oo tan iyo 26-kii Juun 2021 maqane ah, taas oo Fahad Yaasiin sheegay in ay dileen Al-Shabaab.
Iclaamin: Bannaanbax ka mug culus midkii hore!
Warar 16 January 2022 21:02
Maxaa saaxiibbada Rooble beegsiga u gooni yeelay?
Warar 16 January 2022 17:40
Farmaajo iyo Fahad oo lagu eedeeyay weerarka Macalimuu
Warar 16 January 2022 16:34